KIIMIKO "CARRUUR": SHARAXAAD KA DUWAN NOOCYADA KALA DUWAN, SAWIRRADA MIDHAHA, TALOOYINKA BEERITAANKA IYO DARYEELKA - BEERTA
Heerka samoplodny xagaaga oo dhadhan fiican leh - kalluunka xayawaanka ah.
Geedka pear waa mid ka mid ah geedaha midhaha ugu caansan ee ka mid ah bannaanka u hiwaayadda.
Cilmi-baadhayaasha jaangooyooyinka iyaga oo ka gudbaya noocyo kala duwan iyo Beelaha waxay soo saaraan noocyo badan oo cusub oo isteroberi ah.
Mid ka mid ah noocyada kuwan waa kala duwanaanta pear Junior.
Iyadoo ay ku xiran tahay xilliga kuleylka cawska ee miro-khudaarta loo qaybiyey xagaaga, dayrta iyo jiilaalka. Darajada maaddada "Carruurta" ayaa loola jeedaa illaa xagaaga xagaaga. Midhaha kala duwan ee noocan ah u bislaadaan xagaaga, laga bilaabo bartamihii July ilaa bartamihii-Agoosto.
Noocyada xagaaga waxaa ka mid ah Duchess, Chizhovskaya, Carmen, Moscow Early iyo Orlovskaya Summer.
Taariikhda dhalashada iyo taranta gobolka
Fasalka "Jaamcada" ayaa waxaa keenay dhaliyaha la yaqaan Yu.A. Petrov iyo N.V. Efimova ee Machadka Dhaqdhaqaaqa Isboortiga iyo Tiknoolajiyadda ee Dhaqaalaha iyo Xannaanada (VSTISP), Moscow.
Kala duwan ayaa la helay iyagoo gudbinaya lambarka 8 ee iskudhaf la'aanta ah oo leh noocyo isdabajoog ah Dushes xagaaga.
Asal ahaan, noocyada kala duwan ayaa loo qaybiyaa sirqoollada Moscow iyo meelaha deriska ah. Kala duwanaanta noocaas ah ayaa loo arkaa Gobolka Bartamaha.
Gobolka, noocyo of pears Gera, Cathedral, Krasnobokaya, Elena iyo Vernaya si fiican u koraan.
Kiimiko "Carruurta": sharaxaadda kala duwanaanta iyo sawirrada
Dhirta dhirta - sare, iyo sidoo kale pear "Carruurta" waxay ku kala duwan yihiin duruufaha. Tijaabadu waxay ka kooban yihiin dhowr, laakiin laamood awood leh oo leh tiro farabadan; fruiting waxay ku urursan yihiin iyaga.
Caleemaha dhirta waa mid toosan, qaro weyn, midab khafiif ah oo midab leh. Caleemo cagaaran oo madow leh cidhifyo yaryar oo cidhiidhi ah waa siman, oval-qaabeeya.
Midhaha dhexdhexaadka ah (qiyaastii 80 g), pear qaabeeya. Waxay leeyihiin midab jaalle ah, sida midabka ugu weyn, iyo daboolka waa guntada caleenta casaanka ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan noocyada kala duwan iyo fiiri canbaarro "Carruurta" waxay ku jiri kartaa sawirka hoose:
Noocyada wax soo saarka "Carruurta" oo joogto ah iyo sare. Fruiting bilaabmaa ilaa 4-5 sano iyada oo xaalado amaan ah lagu hayo.
Noocyo faro badan ayaa sidoo kale waa Noyabrskaya, Lada, Pamyati Zhegalova, Yakovlevskaya iyo Vernaya.
Kala duwan ayaa loo tixgeliyaa xagaaga hore, sababtoo ah midhaha ayaa u muuqda mid ka horeeya geedaha kale.
Laga soo bilaabo bartamaha July ilaa xagaaga dambe Kiimiko noocyo kala duwan u yeelo milkiilayaasha beertooda. Waxaa looga baahan yahay in la hubiyo in miraha aaney geedka ka goynin oo ay ka saaraan inta lagu jiro mudo ah Baaskiil la dareemi karo.
Saxarka ee miro waa mid aad u casiir leh oo macaan. Miraha waa mid guud ahaan loo isticmaalo. Waxay ku wada baabbe'een wax cusub, la kariyay, la kariyey, xajmiga iyo saxaraha. Waxay si fiican ugu hayn qabow. Qaboojiyaha ayaa laga yaabaa inuu sii ahaado hal bil ah.
Fasalka "Carruur" - baraf u adkaysta. Geeduhu waxay ku noolaan karaan heerkulkiisu hooseeyo iyada oo aan wax dhibaato ah. Xilli-qaboobaha xilliga qaboobaha, waxay sidoo kale u dulqaadanayaan. Waxay awoodaan inay ku noolaadaan heer kulka xagaaga.. Dhimashada abaarta xilliga abaarta maaha halis noocaan kala duwan.
Kala duwanaanta "Carruurtu" waa is-rogid, sidaas darteed geedaha uma baahna pollinators dheeraad ah ee fruiting.
Waxaa si fiican u dulqaadanaysa xaaladaha cimilada kala duwan iyo noocyada noocan oo kale ah: Dayrta Yakovlev, Marble, Lira, Moskvichka iyo Forest Beauty.
Geedo geedo ah oo laga helay xannaanada, si joogto ah waa mid ka mid ah marxaladaha aasaasiga ah.
Iyadoo ku xiran hadba sida geedkii loo beeray, noloshiisu way socon doontaa.
Beeridda habboon ee seedling waxay ku farxaan horumarinta guulaha geedka, wakhtiga bilowga ee fruiting ay iyo dhadhanka midhaha badanaa ku xiran tahay tan.
Sidaa darteed, dareen gaar ah waa in la bixiyaa habkan.
Marka aad iibsanaysid seedling waxaa haboon inaad xusuusatid taas ugu fiican ee la nool da'da. Xididdada geedo sannadle ah ayaa ku dhaawacmay intii lagu jiray isu tallaalidda.
Beerto waxaa si fiican loo qabtaa guga hore, sida ugu dhakhsaha badan dhulku wuxuu ku foorarsadaa si uu u qodo dalool dalag. Xaaladda marka deriska la iibsado dayrta, Waad sii baari kartaa illaa guga.
Haddii dhulku horay loo qorsheeyay, markaa godadka waa in la qodo dayrta si ay ciidda ku dhex degto. Fasalka "Carruurta" waa la ogol yahay in lagu sameeyo beeritaanka xilliga dayrta, sababta oo ah darajada waa baraf u adkaystaiyo heerkulkoodu hooseeyo ma dhaawici karaan geedo.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad doorato meel beerta. Waa in si fiican u iftiimaa iyo heerarka dhulka hoose oo hooseeya.. Goob aad u qoyan ma shaqeyn doonto. Xididdada geedku waa in aysan si joogta ah u ahaanin biyaha. Tani waxay u horseedi doontaa burburka.
Waxaa lagama maarmaan ah in la bilaabo dhulgariirka iyada oo ay lagama maarmaan tahay in la qodo cirifka pit 50-60 cm qoto dheer iyo qiyaastii 1 mitir dhexroor. Nidaamka asaasiga ah ee geedku wuxuu ku kori doonaa godadka sanadaha ugu horreeya, sidaas darteed waa in la siiyaa dhammaan walxaha lagama maarmaanka ah.
Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad sameyso godadka ceelasha ee ciidda bacrin ah iyo humus (1 baaldi). Si aad u dhaqso badan oo kobcis ahna waad ku dari kartaa 200 g oo ah superphosphate, 50 g oo amooniyam ah iyo 100 g of potassium sulfate.
MUHIIM: Ha isticmaalin digada cusub halkii khudaarta. Waxa uu gacan ka geysan doonaa xaqiiqda ah in xididdada geedka gubanaya.
Ka dib markii godkii la qoday oo ay ka buuxsameen nafaqooyin, buur yar oo dhulka ah waa in lagu shubo hoose ee ceelka. Ku dhaji dharkiisa, si taxaddar leh u faafi xididdada buuraha oo dabooli kara ciidda.
Haddii ay jiraan goobooyin hawo ah oo ku yaal godadka dhulka, tani waxay horseedi kartaa xididada laga bilaabo jeermiska.
Marka uu hurdo waxay u baahan tahay waqti ka waqti si biyaha loo daboolo biyaha. Waxay ku dhaqi doontaa ciidda laga bilaabo xididada, dhulka ayaa la isku darayaa oo buuxi hulalka hawada ee la sameeyo. Geedaha qallalan ee dhinaca koonfureed u leexo si ay u hirgeliso marka ay gaadhayso qorraxda.
Marka geedka la beeray, waa waa in lagu xiraa jeex. Dabayshu ma dhegi doonto sap udgoon, oo xididdadiisuna waxay ku hadhi doontaa xaalad halligaysa. Tani waxay ka caawineysaa inuu isaga dego meel cusub oo ka sii fiican.
Dhulka ku wareegsan seedling ha fiicnayn hoosta. Ciriiri adag oo isku dhafan ayaa dabin doona oksijiinka loo baahan yahay horumarinta xididka.
Noocyada dhirta "Carruurtu" waa dherer. Sidaa darteed, waxay u baahan tahay manjooyin cusub oo taajir ah. Laamo iyo caleemo badan ayaa ka hortagaya iftiinka qorraxda ee ka dhexjirta gudaha taajka. Tani waxay hoos u dhigeysaa koritaanka ubaxa, dib udhaca bilawga ah ee fruiting, yaraynaysaa dhalidda, waxyeello dhadhanka miraha.
Bilaabidda dhismaha taajku waa lagama maarmaan Isla markiiba, sida ugu dhakhsaha badan seedling loo go'aamiyey meel joogto ah.Dhirta yaryar waxay abuuri karaan taaj leexinta ama leexinta laanta. Isticmaalkan kala bixiyeyaasha ama ku xiran barkin. Caleemaha koraya xagal ba'an ayaa lagu hagaajiyaa cidhiidhiga.
Oo sii kordhaya xagasha cirifka ah ee soo jiidata maskaxda, ku xiran xarig ama xadhig. Jilifka geedka waa in la ilaaliyaa gaasaska oo laga sameeyey wax adag.
Ka dibna, waxay xidid ku leeyihiin xagasha quman. Gooyaa ma aha mid aad u wanaagsan caafimaadka ee pear, sidaas dariiqadani waxay ku habboon tahay sameynta taajka pear.
Xoqitaanku waa ama yareynta caleemaha, ama khafiifinta laamaha. Caleemaha waxay u baahan yihiin inay jaraan kelyaha. Laamo waaweyn ayaa laga saaraa laba marxaladood: marka hore, jarida inta badan laamaha, kadibna gooyo inta kale.
Marka la sameynayo taajkii 5-6 iskudhaf laamood (waa weyn) ayaa laga tegayaa. Caleemaha ku jira xagal ba'an oo udubdhexaad ah kuma haboona iyaga. Marka pear ay midho u dhali doonto, laanahani waxay jebin karaan miisaanka miro.
Laamaha ugu muhiimsan ee taajka ah ee geedaha midhaha ah waa laamaha hoose ee hoose. Waayo, isagu wuxuu dooranayaa 3 caleemo on wareegga of asliga ah.
Heerka xiga waxaa la sameeyaa ka dib markii laamaha hoose ee ku filan loo horumariyay waxayna bilaabi doonaan inay xoog yeeshaan. Si loo sameeyo qaabka 3aad iyo kan xiga ee ku xiga ayaa ka soo baxay kormeeraha dhexe.
Gooyaa waa in la fuliyaa guga, ka hor inta socodka dheecaan dhirta, ama goor dambe ee dayrta ka hor bilawga ah ee cimilada qabow. Tan waa in lagu sameeyaa qalab fiiqan oo nadiif ah. Gawaarida ugu dhakhsaha badan ee nabarrada geedka ku xiran waxay ku xiran tahay.
Taajka pear waxaa la sameeyaa ilaa shan sano. Ka dib markii geedku si wanaagsan loo sameeyay, kaliya waxa la yiraahdo manjooyin nadaafadeed ayaa la fuliyaa - laamihii hore, jabay ama bukaanka ayaa laga saaray.
Ma inaan xiraa jiilaalka?
Kalluunka "Carruurta" - darajo udgoon udgoon. Geedka dhirta uma baahna wax kulul. Dhirta yaryar waa la xiri karaa: Wareegga jirridda waa in lagu safeeyaa qalabka ku habboon (peat, balka, bacda), waa in la jarjaro, jirkuna waa inuu xirxiraa laamood.
Waxay lagama maarmaan tahay in la gooyo geedka marka ciidda wareegga buundada ay noqoto mid la qalajiyey. Waa lagama maarmaan in la tixgeliyo heerka biyaha dhulka.
Haddii ciidda ku hareereysan geedku uu qoyan yahay oo ku filan awgeed, muhiim ma aha in biyo lagu daro.
Biyaha xad-dhaaf ah ayaa keenaya in ay ka soo baxaan xididada. Faa'iido u ah xaqiiqda ah in geedku uu tabar daran yahay, midho dhalinta ayaa dib loo dhigay, dhalidu waa la dhimay.
Beeraley kasta wuxuu doonayaa geed miro beerta uu ku koro sida ugu dhakhsaha badan, oo bilaw inaad midho u dhasho sida ugu dhakhsaha badan. Wixii koritaanka degdeg ah ee isteroberi iyo bilowga hore ee fruiting, geedka waa in lagu quudiyo nitrogen.
Taas waxaad u baahan tahay inaad kala firdhiso qiyaas ahaan 50 g of ammonium nitrate agagaarka jir geed iyo qodo. Crystals of nitrate waa la burburin karaa qoyaanka iyo faa'iido leh.
Waxaa sidoo kale lagu talinayaa in lagu quudiyo geedka qamadiiumka. Tani waa in la sameeyaa saddex jeer: inta lagu jiro fasaxa biiyaha, ka dibna bisha Luulyo, kadibna dhammaadka bisha Ogost. Tani waxay keenaysaa koritaanka caleemaha iyo caleenta.
Kalluunka "Carruurta" adkaysi u cudurada fangas kala duwan. Laakiin waxaa waxyeelleyn kara cayayaanka kala duwan ee cayayaanka - aboor ku'saabsan, qashin khafiif ah, qafis cadaan ah (leafblock).
Cadaadiska cudurada ugu weyn waxay leeyihiin Wonderful, Svetlyanka, Bere Bosk, Tatiana iyo Svarog.
Si looga hortago isticmaalka daroogada inteksitsidicheskogo ficilka. Kuwaas waxaa ka mid ah "Malathion", "Metaphosis", "Kelifos", iwm..
Baadhitaanka waa in la sameeyaa on maalin qalalan la'aan qalalan. Tani waxaa la sameeyaa guga, ka hor inta uusan biqilka bilaabmin. Tani waxay kaa caawin doontaa in aad ka takhalusto cayayaanka ujirta geed iyo hoosta. Muddo ka dib, geedka ayaa mar kale la buufinayaa.
Cayayaanka cayayaanka ayaa si dhakhso ah u dhufanaya. Xilliga xagaaga waxaa la abuuri karaa dhowr jiil. Waxay caleemo gooyaan, khatarta miraha, laamaha iyo caleemaha geedka.
Haddii aadan ka hortagin cayayaanka, geedka ayaa bilaabi doona in uu engego oo dabadeedna uu dhinto.
Si loo ilaaliyo beertaada cayayaanka, waxaa lagama maarmaan ah in la qaado tallaabooyin ka hortag ah sanadkiiba. Waa inaad si joogto ah u eegtaa jilifka, caleemaha iyo miraha geedka.
Haddii ay dhacdo isbedel kasta oo muuqaalkooda ah, waxaa haboon in lagu buufiyo pear. Ku buufinta ka hortagga ayaa sidoo kale ka caawisa dagaalka ka dhanka ah cayayaanka kala duwan.
Xilliga dayrta waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso dhammaan caleemaha dhacday oo gubanaya - Cayayaanka badankoodu waxay ku badan yihiin caleemo dhacday. Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad qodo wareega garabka oo qoto dheer ku qodo ciidda u dhow geed.
Shanta sano ee ugu horreeya nolosha geedka, ilaa jilifka jirridda ee xoogga leh, waxaa lagama maarmaan ah in dhirta laga ilaaliyo jiirka. Si arrintan loo sameeyo, waxay ku duubaan geedka geed leh qalabka cufan. Tusaale ahaan, anaga. Laakiin jirku waa inuu marka hore ku duubo wargeysyada si uusan alaabtu u taabanin taabashada jilifka geedka.
Cayayaankaani waxay nuugaan dhamaan nafaqooyinka ka soo baxa caleemaha. Caleemaha waxay bilaabaan inay qalalaan iyo dayraan.
Tani waxay si xun u saameeyaa abuurista miraha iyo horumarinta geedka guud ahaan.
Waxaa lagama maarmaan ah in lagu buufiyo ka soo cayayaanka this inta lagu jiro koritaanka burooyinkeeda leh daroogada "Karbofos" ama intexitsid kale.
Aboor ku'saabsanTani waa balastar yar oo leh baalal gogol madow.
Waxay ukunteeda ku dhex jirtaa midhaha.
Hawlgalkeeda, kala duwanaanta "Jejnya" waa midka ugu fiican Barandhadu waa halis u ah kala duwan ee pear xagaaga - miro leeyahay diirka jilicsan oo si sahlan u galaan.
Miraha waxyeello qalalan iyo dhacaan.
Si loola dagaallamo balastarka, waa lagama maarmaan in la isticmaalo sunta cayayaanka ee kala duwan, qodo jirridda geedka dayrta iyo gubi caleemaha dhacday, halkaas oo cayayaanka u tagaan jiilaalka. Waxaa lagu daaweyn karaa benzophosphate.
Aboor la'aan Winter
Waxay ku dhacdaa ukunta dildilaaca ee jilif iyo laan ama meel ku dhow burooyinkeeda. Ka hor inta ubax geed waxay u muuqdaan siigada cagaaran-cagaaran.
Waxay ku quudiyaan caleemaha, ubaxa iyo burooyinkeeda isteroberi. Si loola dagaallamo balanqaadkooda, waxay ula dhaqmaan sunta cayayaanka ka hor inta aan ubaxin geedka.
Waa duug yar. Shakhsiyaadka qaangaarka ah iyo dirxigooduba waxay nuugaan dheecaanka unugyada caleemaha iyo cagaarka geedaha.
Iyadoo ay sabab u tahay dhaqdhaqaaqooda, ubaxu waxay u dhintaan, ugxan-yada ayaa hoos u dhacda, iyo pear ayaa ka baxaya qalalan. Hase yeeshee burburintiisa waxaa sidoo kale loo isticmaalaa intexitsid.
Noocyo ku'saabsan "Carruur" ayaa aad ugu habboon beerta gaarka ah.
Faa'iidooyinka kala duwan ee noocyada kala duwan ayaa ah mugga yar ee miro iyo baahida loo qabo in la sameeyo taajkii geedka.
Laakiin tani waxa ay ka dhigan tahay dhadhanka wanaagsan ee midhaha iyo qaab-dhismeedka.
Iyo sidoo kale Bisayl aad u hore ee miraha iyo fruiting badan. Taasi waa sababta noocyada this waa mid aad u caan ah ee beerta.
Maxay yihiin faa'iidooyinka tufaaxa: isticmaalka iyo ka hortagga
Noocyada ugu quruxda badan ee violets leh sharaxaad iyo sawir
Qeybaha iyo halabuurka ciidda ugu fiican ee basbaaska: geedo iyo beerta, sida loo karsado gacmahaaga
Sida loo badbaadiyo yaanyada laga bilaabo rootiga (verticillis)
Sida loo daryeelo qaboobaha guga xilliga jiilaalka ka dib
Goolasha dhagxaanta ee taranta
Potassium sulfate (potassium sulfate) waa mid ka mid ah Bacriminta ugu fiican ee xooggan ee dhirta, taas oo loo isticmaalo in lagu quudiyo dhirta aan u adkeysan koloriin. Waxaa loo isticmaalaa quudinta dhirta lagu koriyo iyo dhulka furan. Bacriminta waxay ku haboon tahay diyaarinta ciidda horay loo beeray iyo labiska marxaladda daaqsinka. Read More
Alpine Slide Bedelka Guryahaaga
Sida loo daboolo iyo u diyaargarno berde jiilaalka